ne admin pane 2020-12-02
Sophora japonica bvisa genistein kuyerera chati & coa
Genistein isoflavonoid phytoestrogenic komputa inowanikwa mune soya, pea pods, uye mamwe mabhuremu. Iyo inofungidzirwa vanhu yakajairwa chikafu chekudya che genistein, kunyanya se glycosides, iri 0 kusvika 0.5 mg / kg. Genistein aripo muhuwandu hwakawanda kwazvo mune zvekuwedzera zvekudya. Genistein imhuka ...
Heavy simbi yechitatu bato bvunzo mushumo we luteolin, Detection Atlas uye Coa
Zvigadzirwa zvikuru zveShaanxi Green Bio-Engineering Co., ltd.
Kambani yedu ine epamberi yakakwana sisitimu yekugadzira, yakasimba simba rehunyanzvi, inonzwisisika nzvimbo sisitimu dhizaini, yakachena uye yakachena nharaunda. Kambani yedu yakashongedzerwa neakasiyana epamberi ekuongorora zvishandiso, uye iyo yose nzira yekugadzira kubva kune yakasvibirira kudzora kune yekupedzisira ...
NMR, HPLC chati, ongororo mushumo wekaempferol
Sophora japonica bvisa kaempferol 98% Isu tiri vashandi vane hunyanzvi uye vakavimbika vagadziri vezvisikwa zvezvirimwa muChina. Nekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, isu tinorambidzwa kudzora maitiro edu kuyerera. Zviri nyore kupa Sophora japonica kubvisa zvigadzirwa nemutengo unonzwisisika nekuti ...
ferulic acid mutengo unowedzerwa
Kune vatengi vanodikanwa: Ferulic acid mbishi zvinhu zvakawedzera makumi maviri euan pa kilogiramu nguva pfupi yadarika, saka mutengo wechigadzirwa wakawedzera kupfuura makumi maviri euan, Kune zvatinofarira zvakafanana, Kuburikidza nekubvunzana kwemukati kwekambani. Mutengo weyuniti we ferulic acid yakawedzera madhora matatu emadhora pa kilogiramu. Https: //www.sxg ...
Unyanzvi hunyanzvi hwe ferulic acid
Ferulic acid inoshandiswa zvakanyanya muchikafu, mushonga uye indasitiri yezvizoro. Pakati-petemu kushandiswa kwe ferulic acid mu cosmetics indasitiri, vatengi vane zvakakwirira zvinodiwa pavara uye solubility. Shaanxi Green Bio-Injiniya Co, Ltd. yakagadzira kuenderera kwekuyedza kuyedza mune izvi ...
mimwe michina yakagadzirirwa
MunaAugust 2020, nekuwedzera kwevatengi maodha, Shaanxi Green Bio-engineering Co, Ltd., pahwaro hweyekutanga michina, ipa iyo yekudyara simiti mota nyowani mbiri, ina musuo hovhoni, maviri maitiro akashata uye imwe yakakwira kuita kwemvura chromatography . Kambani yedu ine ...
Hupenyu hwezvigadzirwa hunotorwa kubva kuhunyanzvi hwekuenderera kwehunyanzvi
Muna 2020, pasi peinovheneka coronavius ​​pneumonia, maindasitiri mazhinji akakuvara zvakanyanya. Pasi pesimba renzvimbo huru iyi, kutengesa kweShaanxi green Bio- Engineering Co. Ltd. kwaive nekudzora kukura. Izvo hazvina kuita netsaona asi mhedzisiro yekambani yedu yeR & D vashandi uye productio ...
Glycosides kubva kumichero yezvirimwa
Yakagadzirwa neshuga uye isiri-shuga zvinhu. Kujairika kweglycosides kuri muchikamu cheshuga. Mhando dzakasiyana dzeaglycones dzine zviitiko zvakasiyana zvemuviri uye zvine mabasa mazhinji. Semuenzaniso, digitalis mashizha ane moyo glycosides, uye ginseng ine ginsenosides ye qi, shengjin ...
Dyara bvisa chigadzirwa chigadzirwa
Iyo data inoratidza kuti muhafu yekutanga yegore ra2014, paive nemabhizimusi e1074 aiburitsa zvirimwa zvekubvisa munyika yangu, kuwedzera kudiki zvichienzaniswa nenhamba yekutengesa mabhizinesi panguva imwecheteyo muna 2013. Pakati pavo, huwandu hwekutengesa hwega hwemabhizinesi akazvimirira ye50.4%, f ...
Dyara bvisa pamusika kupa uye kudiwa
Kune mhando dzakasiyana dzakasiyana dzemichero yemiti. Kugovera uye kudiwa kweizvi zvigadzirwa zvinogara zvichichinja pamwe negore uye zvakasiyana siyana musika zvinhu, uye kusaenzana pakati pekupihwa uye kudiwa kunoitika nguva nenguva. ① Chigadzirwa chinopa kukanganisa Sezvo mbishi zvigadzirwa zvemuti mushoma ini ...